Hive Platform တွင်ကြိုရောက်နေကြသူများ ( Henry Aung ) — HiveHustlers
အောင်မြင်ပါစေ. !LOL. !PIZZA. !LUV
nayhlaingsoe2months ago
ငွေပျက်နေလို့ power up မလုပ်နိုင်ပဲ ထုတ်ရောင်းလိုက်ရတယ် တစ်ဝတ်လောက် !PIZZA
@nayhlaingsoe, sorry! You need more to stake more $PIZZA to use this command.
လိုအပ်နေတဲ့အချိန် ငွေဖေါ်ယူနိုင်တာက ဝမ်းသာစရာပါ။ နောက်ထပ်ကြိုးစားစု ကြတာပေါ့။ !LOL. !PIZZA. !LUV
@nayhlaingsoe, I sent you an $LOLZ on behalf of @kachinhenry
@kachinhenry(1/1) gave you LUV | wallet | market | tools | connect | <><
နောက်ဆို ဒီလိုတောင် ရလောက်ပြီ
" ညနေခင်းလေး ဘော်ဒါတွေနဲ့ ဘီယာလေး သောက်ချင်လို့ ခု post လေးကို vote ပေးပါဦး "
အယ်လဲ့... beer သောက်ဖို့ Vote လေးမစပါပေါ့.... ပီဇာ စားချင်လို့ vote လေးတချက်လောက်....!PIZZA. !LOL. !LUV
အောင်မြင်ပါစေ !LOL. !PIZZA. !LUV
ဖတ်ရတာအားရှိလိုက်တာ။ တစ်နေ့တစ်ပုဒ်တော့ မှန်မှန်တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။
အောင်မြင်ပါစေ. !PIZZA. !LUV. !LOL
ကိုဒွန်ပြောသလို ပါဝါများများနဲ့ vote ပေးဖို့ HP လေးတွေစုကြစို့ 😀။
ခုချိန်တော့ အားမလို အားမရ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ အရှိန်မပျက်သာ သွားပါ။ အချိန်က စကားပြောပါလိမ့်မယ်။ !LOL. !PIZZA. !LUV
အရေးကြီးတာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ရောက်ဖို့ပဲ... !LOL. !PIZZA. !LUV
မြန်မာတွေထဲမှာတော့ ကြိုရောက်နေသူ ဖြစ်သလို အကျိုးအမြတ်လည်း ရနေပါပြီ။
HIVE နှင့်အတူ ဆက်လက်ရှင်သန်ကြပါစို့
ဝမ်းသာရပါ၏။ Hive On.... !PIZZA. !LOL. !LUV
တကယ်ကို အားရစရာပါပဲ လိုက်မမှီသေးပေမယ့် ကျန်မနေခဲ့စေရဘူး ကြိုးစားလျက်ပါဗျာ။ !LOLZ ပီဇာမရှိလို့ပါဗျာ။
@nyinyiwin(6/10) tipped @kachinhenry (x1)
kachinhenry tipped nayhlaingsoe (x1)
ကြိုရောက်နေနှင့်သူတွေဆီက နည်းလမ်းများ ဆင့်ပွားရရှိပီးသကာလ !PIZZA